Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay Amisom inay ku fashilm... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay Amisom inay ku fashilmeen furista wadooyinkii Shabaab ay jareen
Waxa uu xusay in wadada xiriirisa Magaaloyinka Muqdisho iyo Baydhabo ay muhiim u tahay shacabka Koonfur Galbeed, dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu uu baaqay inay ka shaqeyso furista iyo nabadeynta wadadaasi, Sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyin badan ay ka jiraan wadada xiriirasa Afgooye iyo Baraawe iyo mida kale ee aada Kismaayo.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in Ciidamada Amisom ay ku fashilmeen in ay furaan wadooyinka ay go’doomiyeen Al-Shabaab.
Balse taasi bedelkeeda wuxuu ku amaanay ciidamada Amisom inay sameeyeen tababarida ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed, waxaana uu xusay in laga hortagay weeraro badan oo Shabaab Magaalooyinka Koonfur Galbeed ku carqaladeyn jireen.
“Degmooyinkaan ciidamo ayaa loo tababaray, aad ayaan ugu mahadcelinaynaa Ciidamada Amisom, gaar ahaan ciidamada Itoobiya iyaga ayaa noo tababaray, Degmooyinka jidadka inay furaan waa ay ku guuleysan waayeen, laakiin waxa ay ku guuleysteen Degmooyinka habeen kasta la soo weeraray oo laga qaxaayay inay nabad ka dhigaan, sida Magaalada Baydhabo.” Ayuu yiri Madaxweyne Shariif Xasan.
“Waxaan aaminsanahay jidadkaan toog ayeey u la’yihiin, waana ay ku guuleysan doonaan Insha Allah.” Ayuu yiri Shariif Xasan.
Kan-xigaGudoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxwey...
Kan-horeAmisom oo sheegtay inay qaadayaan haw...
39,219,481 unique visits